थाहा खबर: ओडिआईमा छनोट हुँदा नेपाली क्रिकेटलाई यस्ता छन् फाइदा
ओडिआईमा छनोट हुँदा नेपाली क्रिकेटलाई यस्ता छन् फाइदा
राजनीतिक निरासाबीच नेपाली क्रिकेटले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो सफलता हासिल गरेको छ। जिम्बाबेमा जारी नेपाली क्रिकेट टोली सुपर सिक्समा पुग्न नसके पनि ओडिआई (एकदिवसीय) मान्यता पाउन सफल भएको छ। यसअघि, नेपालले सन २००१ र सन २०१४ मा विश्‍वकप छनोट खेलेको थियो। ओडिआई स्ट्याटस के हो? यसपछि नेपाली क्रिकेटलाई के के कुराको फइदा हुन्छ? यस विषयमा रेडियो थाहा सञ्‍चारका रोशन पुरीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलले गठन गरेको सल्लाहकार समितिका संयोजकसमेत रहेका नेपाल क्रिक्रेट संघ क्यानका पूर्वअध्यक्ष विनयराज पाण्डेसँग गरेको कुराकानी :
नेपालले ओडिआई मान्यता पाएको छ, यो भनेको कस्तो हो?
नेपाली क्रिकेटरको लागि यो ठूलो सफलता हो। क्रिक्रेटमा 'ए' ग्रेड र 'बी' ग्रेडको सिस्टम छ। जसमा टेस्ट प्लेलिङ कन्ट्री (देश) भनेको 'ए' ग्रेडको देश हो। अर्को एसोसिएट छ। एसोसिएटसहरूलाई टेस्ट प्लेइङ स्ट्याटस मान्यता बनाउनको लागि विभिन्न चरणमा खेलको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ।
अहिले त डिभिजन सेभेनसम्म पुग्यो। हामी खेल्दा डिभिजन फाइभ थियो प्राप्त देश भनेको 'ए' ग्रेडको टिम हो। अर्को असोसिएटहरू विभिन्न चरणमा छन्। पहिले डिभिजन फाइभ थियो अहिले सेभेन पुगेको छ।
२०१० हामी डिभिजन फाइभ खेलेका थियौँ अहिले २०१८ मा डिभिजन वानमा पुग्यौँ। डिभिजन वानमा आएपछि अब हामी प्लेलिङ कन्ट्रीको स्ट्याटस जानसक्ने आधारमा हामीले बनायौँ। यो हाम्रा लागि पहिलो र ठूलो उपलब्धि हो।
यसले नेपाली क्रिकेट, क्रिकेटर र समग्र देशलाई कस्ता कस्ता कुरामा फाइदा पुग्न सक्छ?
हामीले गर्व गर्नुपर्छ हामी छोटो समयमा एउटा सर्टेन लेबलमा पुगिसकेका छौँ। छोटो समयमा हामी प्लेइङ कन्ट्रीको मान्यता प्राप्त गर्ने बाटोमा छौँ। अथवा यसका लागि ढोका खुला भएको छ। तर, ढोका खुलेर मात्रै भएन। यो टिमलाई प्लेइङ टेस्ट स्ट्याटसमसम्म पुर्‍याउन को लागि इन्टरनेसनल क्रिकेट काउन्सिलले सहयोग गर्छ। अहिलेसम्म हामीले (ट्वान्टी) २० ओभर र ५० (फिप्टी)) ओभरको मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेलका छौँ। यो स्ट्याटस पाउनको लागि हामीले 'फोर डे इन्टरनेसनल टुनामेन्ट' प्रतियोगिता हुन्छ।
चार वर्षको हामीले यो स्ट्याटस पाउनको लागि सयम पाएका छौँ यो हाम्रो लागि निकै ठूलो सफलता हो। यसले हाम्रो लागि दुई तीनवटा कुरामा निकै सहयोग पुग्छ। एउटा अब हाम्रो टिमलाई सफल बनाउनको लागि परिपक्क टिम बनाएर भोलि क्रिकेटलाई देशभरि फिजाइ टेस्ट प्ले स्टाटस बनाउनको लागि चार वर्षको समय हामीसँग छ।
दोस्रो 'फोर डे इन्टरनेसनल कन्ट्री टुनामेन्ट' खेल्न पाउछौँ। तेस्रो टेस्‍ट प्लेइङ कन्ट्रीहरूलाई बोलाएर उनीहरूसँग हामी खेल्नको लागि कुरा गर्न सक्छ। हाम्रो देशमा बोलाउन पनि सकिन्छ हामी त्यहाँ जान पनि सक्छौँ। यसो गर्दा अबको चार वर्षमा नेपालले राम्रोसँग होमवर्क गर्न पाउँछ। यसमा हामी ग्रयासरुट लेबलसम्म लगेर गयौँ भने हामी टेस्ट प्लिङ कन्ट्रीमा जाने सम्‍भावना बलियो हुन्छ।
साथै, हामीलाई यो गर्नको लागि सहयोगसमेत बढ्छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिलको फन्डिमा नेपालको क्रिकेटमा निकै सुधार हुन्छ। करोडौँ (वार्षिक पाँचदेखि सात करोड) बढ्छ। यसले नेपालको क्रिकेट सुधार गर्न सहयोग पुग्छ।
हामीले संरचनातगत रूपले परिवर्तन गर्न जरुरी देखिन्छ, भौतिक संरचनाको दृष्टिले पनि यो बीचमा वा २०२२ सम्म विशेष जोड दिनुपर्ला नि हैन?
सुधार अवश्‍य आवश्‍यक पर्छ। यसभन्दा अघि पनि नेपालमा अरू खेलहरूको लागि केही काम भएता पनि क्रिकेटको लागि खासै केही भएको छैन। हाम्रो पालामा क्रिकेट टुँडिखेलमा खेलका हौँ। त्यो ब्याकराउन्‍डबाट आएर अहिले एक किसिमको सफलता प्राप्त भइसकेको छ।
हामीले सन् १९९८ बाट मात्रै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता गर्न पायौँ। त्योवेला आइसिसी र जिटिभी मिलेर टियु ग्राउन्ड बनाइयो। त्यसपछि जिटिभीले आफ्नै इफोर्टमा पुल्चोक इन्जिनियरिङमा र एउटा सेनजेभियरमा पनि ग्राउन्ड बनाएको थियो। त्यो समयमबाट मात्रै नेपालको क्रिकेट पूर्वधार सुरु भएको हो।
२००२ मा जब नेपाली ग्राउन्‍ड बनायो खेलकुद परिषदले त्यसपछि सरकारको पनि भूमिका बढ्न थालेको हो। सरकारको तर्फबाट भैरहवा, मूलपानी, पोखरा, कोहलपुरमा चारवर्षभित्र कम्तीमा पनि सात/आठवटा ग्राउन्ड बनाउनुपर्छ कम्तीमा चार वर्षभित्रमा हरेक प्रदेशमा एक/ एकवटा फूल फेलेजका ग्राउन्‍ड बनाउनुपर्छ। यो भयो भने क्रिकेटमा विकास गर्न सहयोग पुग्छ।
जिटिभीले बनाएपछि पनि हामीले फिनिसिङ गर्न सकेनौँ, मूलपानीको मैदानले पनि गति लिन सकेको छैन। सन् २०११ मा बन्नुपर्ने मैदान बनिसकेको छैन यसले हामीसँग बजेट नभएको कि प्राथमकितामा नपरेको देखाउँछ?
नेपालको तर्फबाट खेल प्राथमिकतामा परेको छैन। नेपालले जुन स्ट्याटस प्राप्त गरेको छ त्यो पूर्ण खेलाडीको कारण मात्रै परेको छ। खेलाडीको मिहिनेतका कारण मात्रै सम्भव भएको छ।
सरकारका तर्फबाट वा अन्य सरकारवाला निकायबाट सुविधा अत्यन्तै कम छ। हामी अरू देशको तुलनामा धेरै पछि छौँ। धेरै खेलाडीले आवश्‍यक सुविधा पाएका छैनन्। त्यही पनि खेलाडीको क्षमताको कारण मात्रै हामी सही ठाउँमा पुग्छौँ भन्ने हुँदैन।
अब त देशले पनि क्रिकेटले एउटा कुरा देशलाई ब्रान्‍ड गर्छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चिनाउछन् हामी पर्यटनका करा गर्छौं। हामीले टुरिजमका विभिन्न पाटोका विषयमा कुरा गर्छौं। तर, स्पोर्टस टुरिजम पनि मुख्य फ्याक्टर हो।
मैले गरेको मूल्याकन हेर्ने हो भने नेपाललाई क्रिकेटले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता यहाँ आयोजना गर्ने क्रममा टुरिजम सेक्टरलाई कम्तीमा दुई/ तीन अर्ब रुपैयाँको योगदान पुगेको छ। नेपालमा २० वर्षको अन्तरालमा धेरै प्रतियोगिता भएको छ यसले स्पोर्टस टुरिजममा महत्पूर्ण योगदान दिएको छ।
क्रिकेटलाई अलि सपोर्ट गरेमा टुरिजममा पनि ठूलो योगदान गर्छ। नेपालीहरू धेरै देशमा छरिएर बसेका छन्। क्रिकेट खेल्न जाँदा त्यहाँ सपोर्ट पाएका छन्। विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरू अन्तर्राष्‍ट्रियस्तरको खेल नेपाली खेल्दा गर्व महसुस गर्छ र खेलाडीले पनि सपोर्ट पाउँछन्।
पछिल्लो नेपाली क्रिकेटको गति हेर्ने हो भने जँहा पुग्छ त्यहीँ जोगाउने मुख्य चुनौती छ नि यसको कारण के हो?
घर बनाउँदा जग बनाउनुपर्‍यो। रङ मात्रै राम्रो लगाएर हुँदैन। खेलाडीको ट्यालेन्ट हो। अब स्‍टक्चर बनाउन पर्‍यो सुविधा खेलेर मात्रै हैन। डिभिजन टु र अहिलेको अवस्थामा धेरै योगदान नयाँ खेलाडीबाट भएको छ अन्डर १९ बाट आएका खेलाडीले गरेका छन्। यही नै ठूलो कुरा हो। योभन्दा अघिको जेनेरेसन अन्डर १६ अन्डर १९ हुँदै आएको हो।
अहिलेको नेपालको अर्गनाइजर स्टक्चर छैन। रेगुलर कार्यक्रम हुँदैन। अलग्गै 'फोर डे'४ डे खेल्ने हो भने २ डे खेल्नुपर्‍यो थ्री डे खेल्नुपर्‍यो। यो सबै गर्ने आयोजक संस्थाले ले हो। यो सक्षम नभएसम्म हुँदैन।
१९९६ मा हामी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा छिरेको टिमले १०/१५ वर्षमा कहाँ पुग्यौँ के हामी डेलिगेसन त अर्गनाइजेसनको पनि चाहियो खेलाडीले खेलिहाल्छ नि भन्ने हुँदैन।
छिमेकी देशबाट नेपालले किन सहयोग पाएको छैन के भारतले सहयोग गर्न चाहँदैन?
होइन पहिले श्रीलंकाले गर्‍यो। भारतले पनि सपोर्ट नगरेको हैन गरेको छ। हाम्रो टिमलाई इन्डियामा खेलाएको छ। दिल्ली, बेङलोर, चेन्नाईलगायतका स्थानमा उनीहरूकै खर्चमा खेलेका छन्। इन्डियाले पछिल्लो सयम उनीहरूको डोम्स्टिक लिगमा खेलाउन भनेर हामीले आग्रह पनि गरेका छ। उनीहरूलाई आफ्नै खेलाडीको प्रेसर बढी छ। पहिले शक्तिले इन्डियामा अवसर पाएको थियो। अहिले सन्दीपले अवसर पाएका छन्। हामीले जतिवेला अवसर पाउन सक्थ्यौँ त्यो समयमा संघमा विवाद भयो। संघले पहल नगरेपछि समस्या भएको हो।
यो विवाद समधान गर्ने जिम्मेवारी पनि त तपाईंकै छ नि कहिले मिल्छ त?
इस्यु केही छैन अन्त्य हुनुपर्ने हो। सबै कन्ट्रीमा हुने किसिमको स्ट्रक्‍चर बनाउनुपर्छ भन्ने क्यानको भनाइ छ। हामीले अलिकति परिमार्जन गरेका पनि छौँ।
आइसिसीले अर्को सुविधा दिएको छ मार्चसम्मको नेपालको बाटोलाइ सजिलो बनाउनु पर्छ। रोडम्यापमा चल्यो भने क्रिकेटलाई अघि बढाउन लाग्यो भने हामी अघिसार्छौं। आजका दिनमा धेरै खर्च गरिरहेको छ। त्यो कतिदिन खर्च गर्छ। खेलाडीले यति धेरै मिहिनेत गरेको छ। अहलेको एटिच्युड ठीक नभएकै हो। आइसिसीले भनेपछि भएन भन्ने कुरा हुँदैन हामीले गर्नैपर्‍यो नि।
अबको नेपाली क्रिकेटको भविष्य कस्तो रहला?
नेपाली क्रिकेटको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले तीनवटा कुराले क्लिक गरेको छ। एउटा सरकारको भूमिका बढेको छ। सरकाको सुविधा बढाएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी बढेको छ।
तेस्रो खेलाडीको प्रर्फनेन्समा पनि राम्रो हुँदै गएको छ। यसको लागि संघ चाहियो। संघमा जो पनि खोज्छ तर त्यसलाई मेन्टन गरेर राखिरहने काम गर्नुपर्‍यो भन्ने खालको व्यक्ति आउनुपर्‍यो। लिन्छु हैन दिन्छु भन्ने किसिमको काम आउनुपर्छ सरकार वा खेलाडी यी सबैलाई अघि बढायो भने राम्रो हुन्छ।
नेपालको टिम बलियो बन्दै गएको छ। नेपालमा नेपाली मात्रै खेल्छन् भन्ने प्रभाव आइसिसीलाई छोडेको छ। यहाँ कोही विदेशी आएर नेपाली टिम बनाएर खेलेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय गेम खेल्दा नेपाली सिटिजन मात्रै भनेका छौँ। आइसिसीले पनि लोकलले खेलेको गेममा उनीहरूले प्राथमकितामा राखेको छ। अब हाम्रो संघमा देखिएको विवाद मिलाउनुपर्छ। मार्चसम्म मिलाउने लक्ष्य राखेका छौँ। हाम्रो खेलबाट आइसिसीसमेत छक्क परेको छ।